चीनको तुलनामा नेपालमा भारतको प्रभाव बढ्छ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चीनको तुलनामा नेपालमा भारतको प्रभाव बढ्छ?
बीबीसी। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक मुलुकको सत्ता सम्हालेपछि पहिलो विदेश भ्रमणकालागि भारतलाई छाने। प्रधानमन्त्री ओलीले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलकासाथ तीन दिने भारतको औपचारिक भ्रमण गरे। ओलीले शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे।
सो भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजानकालागि ‘बराबरी, परस्पर विश्वास र सम्मान’ को भावनमाथि विशेष जोड दिइएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने परम्परा जस्तै छ। तर, ओलीलाई चीनको मित्रका रुपमा हेरिँदै आएको छ। २०१६ मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा भारतको आलोचना गर्दै भारतले नेपालको अन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए।
ओलीको यो भारत भ्रमणको निकै चर्चा भयो। तर, ओलीकातर्फबाट जारी बयानमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकार विश्वासका आधारमा दुवै मुलुकबीच सम्बन्धलाई बलियो उचाइमा पुर्याउन चाहन्छ।’ ओलीकातर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म यो पटक हाम्रो सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीको वास्तविकताको आधारमा नयाँ उचाइमा लैजाने बोटो खोज्ने मिशन लिएर भारत आएको छु। हामी आदर्श सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं।’
समाचार एजेन्सी पीटीआईले भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेलाई उद्धृत गर्दै दुवै मुलुकबीचक रक्षा र सुरक्षा, कृषि र व्यापारमा साझेदारीकासँगै रेलवे र पानीको बाटो सम्पर्क राम्रो बनाउने विषयमा केन्द्रित गरकेको जनाएको छ।
भारतको रक्सोलबाट नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई इलेक्ट्रिक रेल लाइनसँग जोड्ने सहमति भएको छ। त्यसकालागि भारतले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने छ। गोखलेका अनुसार मोदीले ओलीसँग भने, ‘भारत नेपालको विश्वसनीय साझेदार बनिरहन्छ र भारत नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रतिबद्ध छ।’ तर, के यो भरोसा चीनसँग लगातार नजिक भइरहेको नेपाललाई विश्वास दिलाउन सक्छ की भारत नेपालको सबैभन्दा विश्वसनीय सहयोगी हो?
बीबीसी संवाददाता संदीप सोनीले दुवै देशको परिवर्तन भइरहेको सम्बन्धबीचबाट उठ्ने प्रश्नलाई लिएर नेपाल वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग कुरा गरेका छन्।
मोदी र ओलीको शिखर वार्तामा जुन विषय आएका छन्, त्यसमा एउटा नीतिगत विषय त हुँदै हो। के चाँही स्पष्ट हो भने नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ। खासगरी विगत तीन वर्षमा नेपालमा चीनको प्रभाव धेरै बढेको छ। र, यसक्रममा भारत र नेपालको सम्बन्धमा चीनको अनुपातमा निकै कमी आएको छ।
केपी शर्मा ओली यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा जति चाँडो दिल्ली गए, त्यसबाट मलाइ के लाग्छ भने नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नु भारतको पनि प्राथमिकतामा परेको छ।
तर, के प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता सूचीमा चीनका ठाउँमा भारत आएको हो? यो उत्तर सजिलो छैन। तर के चाँही हो भने ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको थियो र सो संविधानलाई लिएर भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। त्यसकारण नेपालमा भारत विरोधी माहोल बन्यो। ओलीले त्यो भावनासँग आफ्नो सुझाव देखाए र उनले वैकल्पिक स्रोतका रुपमा चीनसाग व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
के भन्न सकिन्छ भने चीनको उपस्थिति नेपालमा बढेको छ। र, ठूलो मात्रामा लगानी पनि आएको छ। चीन ठूलो खेलाडी बनेर आएको छ र यो भारतकालागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल तत्काल पछि हट्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो। तर, राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धमा काफी उतार–चढाव आएको छ। विगत १०÷१२ वर्षमा नेपालमा भारत निकै अलोप्रिय भएको छ। भारतमाथि नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्याजेट गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भारतको हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले राम्रो मान्दैनन्।
नेपालमा नाकाबन्दीका बेला चीनले नेपालका कठिन परिस्थितिमा समर्थन गरेर आफू असली छिमेकी भएको भरोसा दिलायो। चीन नेपालसँग रेल सम्पर्क बढाउनकालागि अगाडि बढेको छ। चीन तिब्बतदेखि लुम्बिनीसम्म रेल सम्पर्क लैजान चाहन्छ। भर्खरै मात्र नेपालले चीनको ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ। जसका कारण पनि चीन नेपालको नजिक आएको छ। तर, नेपालको भारतसँगको सम्बन्धको आयाम चीनसँगको सम्बन्ध भन्दा पृथक छ।
यो भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिलाई लिएर पनि नेपालमा केही शंका छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०१४ मा पहिलो पटक नेपाल आएका थिए, त्यो बेला उनले भारतले नेपालमा जुन परियोजना निर्माण गरिरहेको छ, तिनलाई सम्पन्न गर्न विश्वसनीय ढंगले काम गर्ने बताएका थिए। ओलीको अहिलेको भ्रमणपछि दुई वटा विषय देखिएका छन्। पहिलो, जुन परियोजनाको कुरा भएको थियो, ती परियोजना समय सीमाभित्र पूरा हुन्छन् वा हुन्नन्।
अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप बन्द हुन्छ वा हुँदैन? दुवै देशको सम्बन्धलागि यी दुई मुख्य विषय हुन्।
हाइड्रो प्रोजेक्ट वा विकासका अन्य यस्ता प्रोजेक्ट जुन पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्छ, यदि २० वर्षसम्म पनि पूरा भएनन् भने विकासको लाभ जनस्तरसम्म पुग्न सक्दैन। र, भारत विरोधी भावना बनिरहन्छ।